MrDBA August 17, 2009 at 11:53 PM
မျှော်နေမယ်နော် .... အပိုင်း ၃၀ထက်တော့ မနည်းစေနဲ့
yeah , the diapers r very expensive in myanmar. i don't know why? u will takealot next time.
Anonymous August 18, 2009 at 6:54 AM
သားလေးထွားလာတယ်။ သဘောင်္စီးရတာ မကြောက်ဘူးလား။
ငါးသလောက်ကင်စားခဲ့လား။ ငါးဟင်းတွေ အတော်စားရမှာပဲနော်။
မိုးကောင်းသူ August 18, 2009 at 9:34 AM
subuueain August 18, 2009 at 11:48 AM
သားလေးအရမ်းကိုထွားလာတာဘဲ။ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ ဆက်ရန်တွေကိုမျှော်နေမယ်နော်..
nu-san August 18, 2009 at 11:51 AM
သားသားလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်.. သူ့ပုံလေးတွေတောင် မမြင်ရတာ ကြာပြီ..
ရန်ကုန်ခရီးစဉ်တွေ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်.. ကိုဒီဘီပြောတာ ပိုရီရတယ်.. :D
အမ ကတော့ ရေးဖို့ပျင်းရင်းက ဘယ်က စရေး ရမှန်းကို မသိတော့ဘူး.. :P
သားလေးက ကြီးလာရင် လူချောလေးဖြစ်မှာအေ့... ခုကထဲက သိသာနေတယ်...။
Rita August 18, 2009 at 2:39 PM
မြန်မာပြည်က ဘာတွေ စားခဲ့လဲ
mae August 18, 2009 at 2:54 PM
coffee mix ပြန်ရောင်းစားပေါ့ကွယ်
WWKM August 18, 2009 at 7:19 PM
မြန်မာပြည်ပြန်သွားတာလား.. ၀ါလည်း သင်္ဘောစီးရမှာအရမ်းကြောက်
တယ်သိလား..အမျိုးသားက ဧရာဝတီတိုင်းမှာပို့စ်တင်ကျတော့ အသွား
အပြန်ခရီးတွေကို တစ်ညတာလုံး သင်္ဘောစီးရတာလေ.. အိပ်မပျော်ဘူး
သင်္ဘောပေါ်မှာ. ကြောက်လို့.း)))
Rita August 18, 2009 at 10:36 PM
မီယာ August 19, 2009 at 5:40 AM
Anonymous August 19, 2009 at 11:23 AM
တော်သေးတာပေါ့၊ ကော်ဖီမစ်ထုတ် ပြန်အမ်းတာ သောက်လို့ ရသေးတယ်။ ချက်လက်မှတ် (စာရွက် အဖြူပေါ်တွင် ဆိုင်ရှင်လက်မှတ်ထိုးပြီး ၁၀၀ ဟု ရေးထား သောစာရွက်) ပြန်မအမ်းလိုက် တာ ကံကောင်းတယ်အမ။ :P
yanmyo August 21, 2009 at 4:57 PM
ဒိုက်ပါတွေဒီမှာတော့ ပေါမှပေါဗျာ..၊ နောက်တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက ကလေး အီအီး၊ရူရူးပေါက်ရင်သုတ်တဲ့ အ၀တ်စိုလေးတွေပေါလွန်းလို့ နောက်ဆိုတစ်ဖာလောက်ဝယ် ရေမွှေးစွတ်ပြီး စနိုးတာဝါလိုမျိုး အီအီးတာဝါဆိုပြီး မြန်မာပြည်မှာ တံဆိပ်တပ်ပြန်ရောင်းရင်အရမ်း မြတ်မှာသေခြာတယ်၊ နေအုံးတွက် ကြည့်ဦးမယ် baby wipes 702 ခု ၁၂.၅ ဒေါ်လာ၊ တစ်ခု မြန်မာငွေ ၂၀ကျပ်ခန့်၊ အင်း.ကုလားရေမွှေးတစ်ဘူးလောက်ရောပြီး..လုပ်စား..၊ ဒါနဲ့ဘာတွေသယ်ခဲ့သေးလည်း..၊ စောင့်ဖတ်နေမယ်၊
ဖိုးစိန် August 22, 2009 at 5:59 AM
(ကျနော်ပြောတာဟုတ်ဖူးနော်... မန့် ပေးတားးး တစ်ယောက်သော သူအတွက်) ကျနော်က တော့ ပုံကြည့်ပြီးကော့မန့် ရေးပေးပြီး ပြုံးနေတာပေါ့...)
ပုံရိပ် August 24, 2009 at 3:04 AM
သြော် ဒါကြောင့် ပျောက်နေတာကိုး။ ဆက်ရေးပါဦး။
thar thar ka chaw lite tar...